कस्तो अचम्म! फोटोमा देखेर युवकसँग विबाह गर्दा भयो युवतीकाे यस्तो बेहाल, विबाहकै रात देखियो यस्तो - Khabar Time
२६ चैत्र २०७६, बुधबार १६:३७ 77 पटक हेरिएको
सुहागरातकै बेला चलचित्रको सिनमा झै आफुले भनेको दुलाह नभएर अर्कै दुलाह पाएको खण्डमा के हुन्छ होला त दुलहिको हाल ? यस्तै भएको छ पंजाबमा । केही दिनअघि पंजाबको लुधियानाकी एक युवतीलाई एक युवकको फोटो देखाएर बिहे गर्न भनिएको थियो । फोटो हेरेर युवती पनि बिहे गर्न राजी भइन् ।
उनको विवाह पनि भयो । सुहागरातका बेला जब बेहुलीको कोठामा अर्कै व्यक्ति आए त्यसपछि बेहुलीले बेहुलालाई खोजिन् । ती व्यक्तिले आफू नै बेहुला भएको बताएपछि भने बेहुलीको होसहवास उड्यो । पंजाबकी ती बेहुलीले बेहुलाको पोल खुलेपछि भने सुहागरातकै लागि अस्वीकार गरिन् । वास्तवमा ती युवतीलाई अर्कै युवकको फोटो दखाएर अर्कै व्यक्तिसँग बिहे गराइएको थियो ।
बेहुलाले भने ती बेहुलीलाई बन्धक बनाएर जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखे । यो क्रम तीन दिनसम्म चल्यो । तीन दिनपछि भने युवती त्यहाँबाट भाग्न सफल भइन् र आफ्नो घर पुगिन् । पीडित युवतीले परिवारलाई सबै कुरा बताएर अस्पताल भर्ना भइन् । बिहेका क्रममा बेहुलाले ‘सेहरा’ले आफ्नो अनुहार ढाकेका कारण उनको वास्तविक अनुहार लुकाईेको थियो ।
निति शाह भन्छिनः रातभरि